Izindleko Zomuntu Zokuhlaziywa Kwemininingwane | Martech Zone
Akungabazeki lokho ukuhlaziywa kwedatha unembuyiselo engakholeki kutshalomali… kodwa ngaphandle kwamathuluzi adingekayo, izinto zibiza ngokushesha. Kade senza igama eliyisihluthulelo nokuhlaziywa kokuncintisana kwelinye lamakhasimende ethu isikhathi esingaphezu kwamaviki amathathu manje - sihlanganisa ithani ledatha, amagama angukhiye angaphezu kwe-3, futhi sikubeka phambili ngesandla. Kuyabiza lokho futhi sihlala sifuna ithuluzi elilandelayo le-BI ukusisiza ukunciphisa isikhathi nezindleko zalokho kubika.
Intuition kanye nombono kuhle, kepha amabhizinisi enza izinqumo zamasu ngedatha ayaqonda kangcono imakethe yawo futhi azwana nokukhula ngokushesha. Idatha ye-Business intelligence (BI) ingasiza ekuqondiseni imizamo yokukhangisa, emisha, nokugxila komkhiqizo, futhi izinombolo ezifanele sezivele zikhona ezindaweni eziningi zokwenza kuyo yonke inhlangano. Kepha ukuqoqa nokubika le datha ngesandla kungaba inqubo ebizayo. Ukuze sikhanyise ngale nkinga, sibheke ukuthi ukubika mathupha kungabiza malini ibhizinisi elijwayelekile.
Ikholomu Eyishlanu Imidiya ithuthukise le infographic ye- I-Domo zisebenzisa ukuhlaziywa kwazo nedatha kusuka ku- I-Salary.com. I-Domo iyithuluzi elisha lezobunhloli lebhizinisi (bhalisa kusayithi labo ukuze ungene lapho kwethulwa).
Tags: Ama-Analyticsbiamathuluzi bikwezamabhizinisiizindlekoukuhlaziywa kwedathadomoUmholo